1 SAMOELA 20.1-23 F. 2 | Fitandremana Ankadifotsy
1 SAMOELA 20.1-23 F. 2
INONA NO TIANAO HATAOKO AMINAO?
Fitiavana sy fankahalana. Mpianaka i Saoly sy Jonatana ary samy mifandray amin’i Davida izy mianaka saingy ny an’i Saoly fankahalana no mameno ny fony ka izay hahafaty an’i Davida ihany no tena nimasoany. I Jonatana kosa ny mifanohitra tanteraka amin’izany. Tia an’i Davida izy, eny tia azy tahaka ny tenany aza izy. (17) Tsy marina izany teto ilay voalaza hoe : “Ny zanaka lahy manahaka an-dRainy”. Tantara tena miavaka io satria tsy
mbola voalaza fa nisy olona tia ny namany tahaka ny tenany afa-tsy eto ihany. Izany anefa no didy voalohany manaraka ilay hoe: “Tiava an’i Jehovah amin’ny fonao rehetra”. Ka tao anatin’ny fankahalan’i Saoly an’i Davida sy nitadiavany hifofo ny ainy no nitadiavan’i Jonatana ny fomba rehetra kosa hanampiana an’i Davida ka hoy izy taminy tsy nisalasala : ”Inona no tianao hataoko aminao?” (4 DIEM). Fanontaniana miendrika fanoloran-tena tanteraka hanampy amin’ny fahasahiranana mitranga. Dia ahatsiarovana ny fanontanian’i Jesosy an’ilay jamba izany. Ny olona vonon-kanampy dia tsy mihambahamba mametraka fanontaniana toa izany. Tsara alain-tahaka izany fitiavan’i Jonatana izany.
Hambarako aminao. Ny tena sakaiza tsy manafin-javatra amin’ny namany na zavatra hahasoa azy izany, indrindra fa mety hampidi-doza azy. Izany no ataon’i Jonatana eto. Tahaka izany tsy misy hafa no nambaran’i Jesosy tamin’ny mpianany: ”Efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin’ny Raiko no nambarako taminareo” (Jaona 15.15). Ny olona efa mahatsapa tena hoe tena sakaizan’i Jesosy ka hanambarany ny zavatra rehetra izay nambaran’ny Rainy Azy dia manana fifaliana sy fiadanam-po ao antiny.
Vonon-kanampy ny hafa isika. Eny, hitondra famonjena ho azy mihitsy aza ka sahy manontany hoe: Inona no tianao hataoko aminao?